Dina Mialinelina: Hanarina ny kanto
Mankalaza ny tsingerin-taonany i Dina Mialinelina, ilay mpanakanto ao anatin’ny gadona “world music” ary efa nilomano tao anatin’io tontolon’ny mozika sy kanto io am-polon-taonany mahery izao.
Andry Barhone: tsy nampidirin’ny olona nefa hanentana
Manana ireo tsiaro tena nanamarika azy ny olombelona tsirairay. Manaiky ny hizara izany amintsika i Andry Barhone, izay fantatra eo amin’ny sehatry ny fanentanana sy ny fanaovana hatsikana:
Stephanie, Denise, Black Nadia…mahay manasongadina ny endriny!
Samy manana ny « maquillage » efa fanaony andavanandro sy manendrika azy, ireo olo-malaza toa an-dry Denise, Black Nadia, Stéphanie...
Manohy Narimanana, mpanakanto: Mizara toro-hevitra hikoloana hoho, azo alain-tahaka
Mpanakanto manan-talenta eo amin’ny fitendrena gitara i Manohy Narimanana. Mbola kely izy dia efa nirotsaka tao anatin’ny tontolon’ny mozika ary isan’ny nanofana azy mian-dalana hankafy sy ahafehy ny gitara, ireo ray aman-dreniny, izay mpitendry gitara ihany koa.
Laingo Paps (mannequin) : Manasa tarehy amin'ny rano mafana no mahamanja be azy !
Mpilatro matihanina any Parisy i Laingo Pappageorgiou. Metisy grika avy amin’ny rainy izy ary ny reniny kosa tera-tany Malagasy. Nahitana azy ilay raki-tsarin’i D.Lain nivoaka tamin’ny volana jolay 2018 izay nahodina tao Corse, Frantsa fa mialohan’izany dia efa nilatro foana i Laingo, nanomboka ny taona 2014.
Mirindra : Mizara toro-hevitra mahatsara tarehy sy bika
Handray anjara ao anatin’ilay fifaninana WCOPA hotanterahina amin’ny volana jolay ho avy izao i Ranaivosoa Santatra Mirindra.
Black nadia : Mandeha taksibe, miantsena “friperie”,… zanak’olon-tsotra aho, hoy izy
Isan’ny mpanakanto tena malaza eto an-toerana raha i Black Nadia. Mitandrina amin’ny fihetsiny, misafidy ny hiaina miafina kokoa, tsy dia manao ny fanaon’ny olon-drehetra loatra matetika no hahafantarana ny olo-malaza. I
· Mpandalina fiarahamonina
Ao anatin’ilay fandaharana “Pozitiv” mandeha amin’ny fahitalavitra iray eto amintsika izao no ahitana matetika an’i Iary. Miompana amin’ny fampivoarana ny maha-olona sy ny kolontsaina malagasy io fandaharana io, izay iarahany manatontosa amin’ireo “coach” momba ny fampivoarana ny maha-olona maro, ary narindra indrindra mba hiantefa any amin’ny fianakaviana rehetra sy hanova ny fiarahamonina.
· Mpamorona didin’akanjo
Tsy nianarana akory ny azy ny fanjairana fa efa fitiavana mamorona sy manana zavatra miavaka hatramin’izay. “Nihomehezan’ireo ankizy aho taloha fa mahita foronina foana amin’ny akanjo izay anaovako”, hoy izy mitantara. Izay akanjo misy eo am-pelatanany sy izay kojakoja ananany, tamin’izany, no nanovàny endrika ny akanjo nanaovany. Taty aoriana izy dia namorona andian’akanjo mihitsy ary efa nisy nivoaka ireo, tany amin’ny taona 2014 tany.
· Mpanao mofomamy sy “patisserie”
Isan’ny tia mahandro ny reniny, ka na tsy nianatra aza i Iary dia toa niampita ho azy ny fahaizana. Mofomamy tsotra ho an’ny ao an-trano sy ny namana no nataony taloha, fa nisy fotoana, nanapa-kevitra ny handray kaomandy ho an’ny krismasy izy. “Mbola tsy nanamboatra mofomamy betsaka toa iny aho, hoy i Iary. Tsy natory mihitsy fa sady nanamboatra no nandeha nanatitra ireo mofomamy vita ihany koa.”
· Manaingo trano
Ao anatin’ny fandaharana izay tarihiny dia zava-dehibe ho azy ny fanintonana ny mason’ireo mpijery, na eo aza ny lohahevitra mafonja ijoroan’ilay fandaharana. Miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy dia izy no mijery ny fomba hanaingoana ny sehatra. Tsy hatreo ihany anefa fa mivelatra amin’ny fanaingoana trano filanonana na hipetrahana ihany koa izy.